Amiirka Nabadda, Kaniisada Adduunka ee Switzerland (WKG)
Markii Ciise Masiix dhalan jiray, koox malaa'ig ah ayaa ku dhawaaqay: "Ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya iyo nabadgelyada dushiisa iyadoo dadka raalli laga yahay" (Luukos 1,14). Maaddaama ay yihiin kuwa hela nabada Eebbe, Masiixiyiintu waa u gaar ah adduunkan dulmiga iyo danaha badan. Ruuxa Ilaah wuxuu u horseedaa Masiixiyiinta nolol nolol nabad-helis, daryeel, daryeel iyo jacayl.
Taa bedelkeeda, adduunka nagu wareegsan wuxuu si joogto ah ugu lug leeyahay khilaaf iyo dulqaadasho, ha ahaato mid siyaasadeed, mid qowmiyadeed, diin ama bulsheed. Xitaa hadda gobollada oo dhami waxay halis ugu jiraan inay ka baxaan xanaaq hore iyo nacayb. Ciise wuxuu ku tilmaamay farqiga weyn ee calaamad u ah xertiisii ​​markii uu ku yidhi: "Waxaan idiin dirayaa sidii ido yeey ku dhex jira yeeyga" (Matayos 10,16).
Dadyowga dunidan ku kala nool, oo siyaabo fara badan ugu kala qaybsamay, ma heli karaan jidka nabad lagu helo. Jidka adduunku waa jidka isu-danta. Waa dariiqa hunguri, masayr, nacayb. Laakiin Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi, Nabad baan idiinka tegayaa, nabaddaydana waan idin siinayaa. Ku siin maayo sida dunidu u siiso " (Yooxanaa 14,27).
Masiixiyiinta waxaa loogu yeeray inay hortiis ku qiiroodaan Ilaah hortiisa "inay raacaan waxa nabadda u adeega" (Rooma 14,19) iyo "ku dadaasha nabada qof walba iyo quduusnaanta" (Cibraaniyada 12,14). Waxaad qayb libaax ka qaadataa "farxad iyo nabad oo dhan ... adoo u maraya xoogga Ruuxa Quduuska ah" (Rooma 15,13).
Nooca nabada, "nabad ka sarreysa caqliga oo dhan" (Filiboy 4,7), wuxuu ka adkaadaa kala qeybsanaanta, kala duwanaanshaha, dareenka keli ahaanshaha iyo ruuxa eexashada ee ay dadku ku lug yeeshaan. Taa bedelkeeda, nabaddani waxay horseed u noqotaa wada noolaansho iyo dareen ah ujeedo guud iyo himilo - "midnimo xagga ruuxa iyada oo loo marayo isku xidhnaanta nabadda" (Efesos 4,3).
Waxay ka dhigan tahay in la cafiyo kuwa na qalda. Waxay macnaheedu tahay inaan u naxariisno kuwa baahan. Waxay ka dhigan tahay in naxariis, daacadnimo, deeqsinimo, is-hoosaysiin iyo dulqaad, dhammaan jacaylka lagu wiiqo, ayaa lagu gartaa xiriirka aan la leenahay dadka kale. Waxay ka dhigan tahay hunguri, dambiyo galmo, mukhaadaraadka, xaasidnimo, qadhaadh, dirir, iyo ku xadgudubka dadka kale ma ku dhex dhici karaan nolosheena.
Masiixu wuu inagu dhex noolaan doonaa. Yacquub wuxuu soo qoray waxyaalaha ku saabsan Masiixiyiinta: "Midhaha caddaaladda waxaa lagu beeraa nabad xagga kuwa nabadda sameeya" (Yacquub 3,18). Nabadda noocan oo kale ah waxay sidoo kale ina siinaysaa dammaanad iyo xasillooni inta ay musiibo jirto, waxay na siisaa nabad iyo xasillooni marka ay musiibo jirto. Masiixiyiintu kama difaacna dhibaatooyinka nolosha.
Masiixiyiintu, sida dadka kaleba, waa inay la halgamaan waqtiyada dhibka iyo dhaawaca. Laakiin waxaan haysannaa caawimaad rabaani ah iyo dammaanad qaad ah inuu isagu na taageeri doono. Xitaa haddii duruufaha jirkeenu mugdi iyo mugdi yahay, nabada Eebbe ee nagu dhex jirta ayaa naga dejin doonta xasillooni, xasilloonaan iyo xasilnaan, innagoo kalsooni ku qabna rajada soo noqoshada Ciise Masiix marka nabadiisu ay buuxin doonto dhulka oo dhan.
Sida aan u sugeyno maalintan qaaliga ah, aan xusuusino ereyadii rasuul Bawlos ee Kolosay Kolosay 3,15: "Oo nabadda Masiix, oo laydiinku yeedhay isku jidh qudha, qalbiyadiinna ku xukunta, oo ku mahadnaqa. ”Ma u baahan tahay nabad noloshaada? Amiirka Nabadda - Ciise Masiix - waa "meesha" meesha aan ka heli karno nabaddan!